Izingxube self-yokululama phansi - lena okunye okukhulu evamile screed ukhonkolo. Kuye indlela yokwakheka ezomile ingxube yokululama phansi efezwayo izinhloso ezintathu eziyinhloko: ukuqondanisa anolaka, saqeda kanye nokuqondanisa evele ku igalaji phansi futhi izakhiwo zezimboni, lapho zisetshenziselwa kungekho ezinengilazi ezengeziwe.
Lapho umgwaqo anolaka wenziwa ngokusebenzisa ephansi flowability Izingxube esinjalo yokululama phansi yakhelwe ukusebenza nge unezikhinsi kakhulu.
Ukuze uqedele ukwakhiwa ukuqondanisa ukusetshenziswa ne fluidity enkulu, okuyinto ukudala indawo ngokuphelele flat ngesikhathi lisakazeka. Izingxube for yokululama phansi nge ngezinga eliphezulu fluidity isetshenziswa ngemva ukuqondanisa anolaka, okwenza phansi ngokuphelele bushelelezi. izingoma ezinjalo asetshenziselwa evele ezofundwa roll izinto, ezifana linoleum noma carpeting.
Iphansi wathela asetshenziswa uncoated, ihlukaniswa kuncike ekamelweni lapho zizosetshenziswa:
imithwalo eqinile mechanical izimpahla ezingamathani angu-10. I ukushuba screed kumele kube mayelana 6 mm, ingxube kufanele kube njengoba bafake nemithi, amelana amanzi ilanga.
Khanyisa naphakathi ekucindezelekeni lokukhanda. Layer Floor - 2 mm.
Izingxube for phansi yokululama zitholakala ngezinhlobonhlobo eziningana:
Gypsum - esetshenziswa ukusebenza ngaphakathi nangaphandle kwezakhiwo.
Usimende - esetshenziswa tie kulesi sakhiwo. Ukuqamba kasimende obukhethekile izithasiselo fibre ukuqondanisa ukwakha inhlanganisela izibuya okhuni.
Epoxide Izingxube ekhiqizwa ngesisekelo ka epoxy inhlaka, ezinengilazi yalolu hlobo babe ukumelana amakhemikhali, zingabantu okunzima futhi iqine, kodwa maloelastichnye, okungase kuthinte at high ukushaqeka imithwalo.
ingxube Acrylic wenza ngesisekelo resin methylmethacrylic yenzelwe kuphela izakhiwo zezimboni, mass enjalo Uqinisa amahora angu-2 yomsebenzi engenziwa ngasiphi lokushisa. Ububi - eyinkimbinkimbi uma usebenzisa olwalwenza kanye nokuntengantenga.
Polyurethane ezinengilazi kanzima futhi nokunwebeka, kahle ukuba vibration njalo futhi ukuhamba phansi, kodwa awukwazi ukumelana kuhlasela zamakhemikhali.
Faka phansi self-yokululama ehlwengekileko ngaphandle izakhi uyakwazi ukunciphisa adhesion.
Evele lapho ingxube sisetshenziswa akufanele zinemigodi, izimbotshana ukuvimbela isixazululo ukuvuza.
Le ncwadi isetshenziswa ngempela iyiphi base uma base self-yokululama phansi ngokushesha ubamba umswakama, ukusebenza priming kumele okuphindaphindiwe emva kwamahora angu-24.
Ngoba ngisho ukusatshalaliswa ingxube usebenzisa amabhikhoni esikhethekile yokululama phansi.
Thela ebusweni imivimbo noma izikwele, ngamunye isinqamu okwalandela elachithwa ukuze emaphethelweni esandulele engakakhuli isikhathi ukuze ome.
Inzuzo self-yokululama floor ukufakwa yayo elula, yingakho kuba obudlange kangaka imisebenzi yokwakhiwa.
Uzimele-panel endlini Izibuyekezo nabanikazi, nobuchwepheshe ukwakhiwa
Siyini-joker futhi kungani sasidingeka?